राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको महाधिवेशन भोली देखि विराटनगरमा शुरु हुँदै - Arunkhabar.com
प्रकाशित : २४ चैत्र २०७५, आईतवार १८:४८
विराटनगर, २४ चैत । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भोली देखि विराटनगरमा शुरु हुँदैछ ।
विराटनगरको जैन भवनमा हुने ८ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा १९ औं बार्षिक साधारणसभामा ७७ वटै जिल्लाका ६ सय ३१ जना प्रतिनिधि विराटनगर आईपुगेका छन् । दुई दिन सम्म चल्ने महाधिवेशनले ४३ सदस्यीय केन्द्रिय समिति चयन गर्ने छ । ३ बर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा दलगत उम्मेद्धवारी दिने भएका छन् ।
नेकपाबाट विराटनगरका राम कार्की र मित्रलाल शर्मा तथा नेपाली काँग्रेसबाट गणेश केसीले उम्मेदवारी दिने बुझिएको छ । अधिकारवादी संस्थामा दलगत प्रतिष्पर्धा हुने देखिएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि दवाव दिने बुझिएको छ ।
महाधिवेशनमा मतदानका लागि सवैखाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हुनेगरि विद्युतिय भोटिङ मेसिनको व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ प्रदेश नं. १ का कार्यक्रम संयोजक विमल वस्नेतले बताउनुभयो ।
भोली देखि विराटनगरमा महाधिवेशन शुरु हुने भएपनि विराटनगरको सडकका कारण धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई महाधिवेशन स्थल सम्म पुग्न समस्या भएको छ ।
वीरेन्द्र सभा गृहमा गर्ने तय भएपनि शौचालय र भौतिकक संरचना अपाङ्ग मैत्री नभएपछि जैन भवनमा सारिएको कार्यक्रम संयोजक वस्नेतले बताउनुभयो । महाधिवेशनकको प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।